जिम गर्न झन्झट मान्नेहरूका लागि उपयुक्त जुम्बा डान्स – जीवनशैली
जिम गर्न झन्झट मान्नेहरूका लागि उपयुक्त जुम्बा डान्स
Home /मनाेरञ्जन, स्वास्थ्य/जिम गर्न झन्झट मान्नेहरूका लागि उपयुक्त जुम्बा डान्स
शरीर फिट एन्ड फाइन भएको सबैलाई मन पर्छ। उमेर बढ्दै जाँदा पुट्ट भूँडी निस्कने समस्या हुन्छ। सहरियाहरूमा त झन मोटोपनले छोइहाल्छ। आफूलाई फुर्तिलो राख्न धेरैले खाना कटौती गर्छन्। कति बिहान हिँड्डुल गर्छन् भने खेल खेल्ने पनि उस्तै हुन्छन्।
तर पनि सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई मोटाउछु र शरीर भद्दा देख्न छ कि भन्ने परि लागिरहेको हुन्छ। पछिल्लो समय धेरै यो समस्याबाट पिरोलिएका छन्। यस्तो समस्याबाट तनाव झेलिरहेका व्यक्तिहरूका लागि नयाँ उपाए आएको छ, जुम्मा डान्स।
यहिले यही उपायतिर धेरै आकर्षित भएका देखिन्छन्। जिम जना झन्झट हुनेलाई त अत्यान्तै उपयोग विकल्प हो जुम्बा डान्स। जिम्मा गएर गह्रौ वस्तु उठाउनु भन्दा अंग्रेजी स्पेनीलगायतका गीतको तालमा हात फैल्याउन गोडा उठाउन ढाड मर्काउने मुन्टो निहुर्‍याउने गरेपछि लागेको बोस र बढेको भूइँ स्वाट्ट भित्र पसिहाल्छ।
एरोबिक्स र फिट्नेस सेन्टर धाउँदा वाक्क बनेकाहरूको मन अहिले जुम्माले तानेको छ। अझ नाच्न जान्नेहरूका लागि यसले दोहोरो फाइदा पुर्‍याउँछ। कतिपय त नाच्न पनि जानिने र फिट पनि रहिने भन्दै जुम्बा डान्स गर्ने गरेका छन्। यदि तपाईंलाई पनि फिट हुन र नाच्न सक्न मन छ भने आजै जुम्बा जोइन हुनुहोस् है।
हेर्दाहेर्दै हास्य कलाकार राष्ट्रपति ! [प्रेरक व्यक्तित्व]
कुन उमेरमा चम्किन्छ तपाईंको भाग्य ?
TAGS: Zumba Dance